Hagaajinta SEO-gaaga Waxyaabaha ku jira: Fikradaha laga bilaabo Sempt
SEO-ga maxaliga ah kama hadlin wax-ka-beddelka goobtaada oo kaliya. Waxay sidoo kale ku lug leedahay ilaalintaxiriir caafimaad leh bulshadaada internetka iyo inaad haysato joogitaanka internetka ee xooggan iyada oo la adeegsanayo boggaaga iyo warbaahinta bulshada. Warbaahinta bulshada ayaa lehnoqdaan meel aad u fiican oo ah wada-xaajoodka macaamiishaada.
Sanadkii 2009kii, Google wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo isu-geynta xogta warbaahinta bulshada ee raadintiisa dabiiciga ahalgorithm. Tani waxay ka dhigan tahay in isku-xirkaaga boggaaga iyo barnaamijyada warbaahinta bulshada sida Facebook, Twitter iyo Instagram ay dhalinayaan in ay sii kordhayaaniyo booqashooyinka goobta. Natiijo ahaan, goobtaada ayaa noqon doonta mid sareeya.
Ganacsiga maxalliga ah, dhammaan faahfaahinta oo ay ku jiraan saacadaha hawlgalka, taariikhda, iyo qiimahawaa inay noqotaa mid taariikhda la socota. Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare ,Frank Abagnale wuxuu siinayaa fikrado kaa caawin doona inaad horumariso boggaga internetka iyo warbaahinta bulshada si aad u gaarto hawlgelin sare iyo darajo
1. Ku dar Blog Blog
Blog ayaa lagama maarmaan u ah shabakad kasta. Isticmaal waraaqaha ugu dambeeya ee ku saabsanalaabadaada iyo adeegyada, macaamiishaada iyo bulshada deegaanka. Si aad u sameyso qoraalka iskudhafka ah, adiga oo tixgelinaya fikradaha soo socda.
Ku dar sawirrada iyo sheekooyinka macaamiisha ee kuxiran ganacsigaaga
Weydii macaamiisha wixii ku saabsan waayo-aragnimadooda iyo talooyinkooda si ay u hagaajiyaan adeegyadaada.Taas ka dib, daabac wareysiga iyo sawirada boggaaga. Helaan ogalaanshahooda kahor intaanad daabicin. U dir joornaalka warbaahinta bulshada ee kala duwanmareegaha iyo bixinta isku xirka boostada blog. Tani waa hab wanaagsan oo loogu talagalay macaamiishaada. Waxay dareemayaan qadarin.
Sawirada Ganacsigaaga Ganacsigaaga Waqtiyada kala duwan
U dir sawirada si joogta ah una sharax fariinadamareegaha warbaahinta iyo sidoo kale bixinta isku-celinta boggaaga. Isticmaal sawirada si aad u cusbooneysiiso Google My Business, sawirrada Yahoo iyo Bing Places.
Tilmaame shey gaar ah ama geli
Tani waxay si joogta ah u caawineysaa in macaamiishaada laguugu cusbooneysiiyo adeegyadaada.
U dir dhoorkii Horrow sheekada la xariira Ganacsigaaga
Aynu sheegno inaad tahay nadiifiye qalalan, oo ku saabsan dharka aad u wasakhaysan ee aad dhaqday. Qorsheekada sida dharku u nadiifsan yahay iyo wixii la mid ah. Ganacsi ma maqnaan karto 'sheeko cabsi' ah. Raadi hal iyo post ku saabsan bartaada iyokadibna la wadaagto warbaahinta bulshada.
2. Isku xirka dadka saameynaya bulshadaada
Isticmaal bogaggaaga warbaahinta bulshada si aad ula xiriirto dadka caanka ah sida dadka caanka ah ee degaankaaga.La shaqee iyaga oo la wadaago boosteejadaada iwm. Shakhsiyaadka maxaliga ah waxay kaa caawin karaan suuqa iyo adeeggaaga. Marka ay jawaabaansi aad faalladaada iwm u hesho, dadka qaarkiis waxay u arki karaan inay yihiin kalgacal.
3. Samee Viral Posts
Markaad abuurto wax khatar ah oo ku saabsan warbaahinta bulshada, dad badan ayaa dareema xiisoganacsigaaga ama shirkadaada. Dadku waxay bilaabi doonaan inay baadigoobaan ganacsigaaga iyo makiinadaha raadinta ay u aqoonsadaan natiijada.
4. La xiriir bulshadaada internetka
Isticmaal dhacdooyinka maxalliga ah si aad ula xidhiidho beeshaada. Ku dhaji dhacdooyinka ka dhacaya xaafaddaadaon warbaahinta bulshada iyo blog ah. Taageerayaasha waxay u badan tahay inay la wadaagaan joornaalada ay dad badani ka warqabaan ganacsigaaga / shirkaddaada. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa degaankataariikhda dhacdooyinka si aad u heshid website-kaaga Hubso in si joogto ah loo cusbooneysiiyo.
Wixii SEO-ga Local si aad u noqoto mid guuleysta, waxay u fiicnaaneysaa darajada sare ee matoorada raadinta iyoka dibna waxaad abuuri kartaa waxyaabo cusub oo loogu talagalay bogaggaaga iyo qoraalada warbaahinta bulshada. Ka shaqeynta macaamiisha warbaahinta bulshada waxay keenaysaa gaadiidka sare ee goobtaadaiyo halkan ka sarreeya heerka makiinada raadinta Source .